China Quick-Dry Qr Code Non-Porous Media 45si 2588 2706K 2589 2580 2590 Cartridge Solvent Ink ho an'ny mpanamboatra mpanamboatra Jet Jet Coding Printer | AoBoZi
Inona no atao hoe kaody?
Ny Coding dia misy ny fampiharana ny lahatsoratra, tarehimarika, marika na endrika hafa amin'ny vokatra na fonosana amin'ny alàlan'ny ranomainty. Ampiasaina ny teny isan-karazany, toy ny fanaovana kaody, pirinty na manisy marika, fa mitovy daholo izy rehetra. Ny Coding dia manana rindranasa sy tanjona marobe ary misy fomba maro samihafa hanatanterahana ny kaody.
Maninona no mampiasa kaody?
Amin'ny alàlan'ny kaody, azo atao ny manome fampahalalana mivantana amin'ny mpampiasa. Azonao atao ny mampiditra ny daty hampiasana, data momba ny fifandraisana amin'ny boaty fandefasana, tranokala na torolàlana ho an'ny mpampiasa. Amin'ny alàlan'ny kaody dia azonao atao ny mamantatra ny vokatra iray. Ny vokatra malalaka, boaty na paleta dia matetika azo fantarina amin'ny alàlan'ny kaody barcode, kaody QR na isa isa. Ny tanjon'ny fanafarana kaody dia ny hahatonga ny vokatra tsy ho simba. Ity dia fampahalalana izay mety manan-danja amin'ny mpamokatra. Izy ireo irery dia tsy manome vaovao. Azonao atao ny mieritreritra kaody batch, angon-drakitra famokarana ary fampahalalana hafa momba ny lalana sy ny fanarahana.
12.7mm HP 2580/2590 cartridge ranomainty fanamainana haingana sy fonosana lehibe mifanentana 25.4mm maina haingana dia mifanaraka amin'ny ankamaroan'ny masinina fanefitra kaody azo amidy eny an-tsena, kaody fitsapana kaody an-tserasera birao fanandramana kaody fitifirana kaody ary loha hafa mahamay. , tsy manentsina, tsy mihena, tsy mahazaka rano ary mahatohitra maripana ambony, miaraka amin'ny tatitry ny fitsapana.
Fotoana fanamainana haingana 2-3 segondra
Fotoana fametahana lava mihoatra ny adiny iray
Dity tsara sy haizina lehibe na dia amin'ny ambany dpi aza
Sary avo lenta misy sisiny maranitra
2580 / 2588M / 2588 + M / 2588K / 2586 / 45si / FOL13B, sns
Plastika, vy voafehy, kosmetika, tavoahangy fisotroana, birao hazo
Fonosana sakafo, atody vaovao, marbra manahaka
Raha tsy ampiasaina ny cartridge ink dia tsy maintsy rakofana fonony izy io. Aorian'ny fisokafan'ny cartridge ranomainty sy famehezana azy dia tsara kokoa ny mampiasa azy ao anatin'ny 3-4 volana.
Teo aloha: TIJ 2.5 Cartridge Original Original Ink an'ny HP 45A 51645
Manaraka: Famerenana tavoahangy miorina amin'ny rano amin'ny cartridge Tinta HP 45A ho an'ny fanontana pirinty Coding amin'ny tanana amin'ny baoritra taratasy
1000ML tavoahangy famindrana hafanana fampidirana inks ...
Fanontana indostrialy tanan-tanana / Oline ho an'ny Coding a ...
18ml vovoka mamirapiratra loko kaligrafy fanoratana P ...
Tinta misy loko ho an'ny Epson / Mimaki / Roland / Mutoh / Canon ...
Ranomainty Eco Solvent miaro ny tontolo iainana ho an'i Roland ...
Fanoratana penina maharitra manoratra amin'ny metaly, pla ...